barlamanka oo cod fara badan ku riday xukuumadii saacid | Sagal Radio Services
Fadhiga manta wayaa waxaa soo xaadirtay 250 Xildhibaan ayaa cod gacan taag ah oo uu Gudoonka Baarlamaanka geliyay mooshinka ayaa waxaa 184 ay u codeysay in kalsoonida lagala noqdo, halka 65 xildhibaan ay diiday mana jirin cid ka aamustay.
Mudanayaasha Barlamaanka Soomaaliya ayaa u fadhiyay si saf saf ah waxaana mar waliba codeynaayay hal saf waxaana tira koob ku sameynaayay shaqaalaha Barlamanka waxaana intaas ka dib loo gudbaayay safka kale.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari ayaa sheegay in mooshinka uu gudbay oo uu ansax yahay, isla markaana Xukuumada ay dhacday, isagoo sheegay in Madaxweynaha ay ka sugayaan inuu soo magacaabo Ra'iisul Wasaare sida ugu dhaqsiyaha badan sida ay dalbadeen Barlamanka.
Wuxuu sidoo kale Jawaari sheegay in sida uu qabo dastuurka Ra'iisul Wasaaraha la eryay iyo Wasiiradiisa ay sii heyn doonaan ilaa laga soo magacaabo Ra'iisul Wasaare iyo Wasiiro cusub
Dhinaca kale Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhow shir jaraa'id qabanaya oo uu kaga hadli doono natiijada Baarlamaanka iyo kalsooni kala noqoshadii Xukuumada.
Dhankiisa R/wasaarihii hore ee xukuumada ayaa sheegay in uu wax walia oo ka soo baxa Barlamanka Soomaaliya uu u hogaasimi doona waxaana uu sheegay in uu barlamanka ugu digaayo in ay gacanta u giliyaan dad dana gaar ah ka leh Dalka Soomaaliya Sida uu sheegay md saacid.
Tags barlamaanka codkii diiday OO u xukuumada